Asflat Kukurudzira Kuenderera mberi mu Ankara | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraAsflat Mobilization Inopfuurira mu Ankara
kusimudzira kufambira mberi kunoenderera mu Ankara
Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi 7/24 basa re asphalt munguva yekubuditsa yakaziviswa sechikamu chekurwisa kubuda kwe coronavirus. Dhipatimendi reSainzi, iro rakatakura matani makumi matatu nemazana matatu nemakumi matatu nemasere emafuta pakati peMay 16-19, akaunza matani makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemasere emafafitera mumaguta makuru chete pamazuva akaiswa nguva yekudzidziswa. Zvikwata zvakazopedzisa kugadzira asphalt paving pamberi peAŞTİ.
Nekuvhurwa kwemwaka weasphalt, Ankara Metropolitan Municipality yakawedzera mhasuru yekugadziridza nekugadziridza inoshanda munzvimbo zhinji dzeMusoro.
Mukati mechikamu chekurwisa denda rekoronavirus, zvikwata zveDhipatimendi reSainzi zvikoro zvakawedzera basa pamharidzo yakaziviswa pakupera kwevhiki; Akaita basa asphalt mune dzakawanda nzvimbo dzeguta kubva kuAltandndanda kuenda kuÇankaya, kubva kuEtimesgut kusvika kuYenimahalle.
77 SHOKO 18 TON ASPHALT MUMUTEMO PAKATI PACHEMA KUSVIRA APRIL KUTI PANO
Pamazuva apo nguva yekudanwa yakaziviswa, iro basa reDhipatimendi reSainzi, iro rakaramba richishanda kune inopfuura imwe nzvimbo nekuda kwemigwagwa isina chinhu, rakapedza matani gumi nematanhatu nemakumi matatu nematatu easphalt pamatare matanhatu nematanhatu nemakumi manomwe nemakumi mapfumbamwe emakumi ematanhatu eapombi yekuisa pamakero makumi matanhatu nematanhatu.
Zvikwata makumi maviri nematatu; Ichiri kuunza zviuru makumi maviri nezvitatu 7 zveasphalt kumigwagwa mikuru mumatanho makumi matanhatu nemana pamazuva mana, yaita huwandu hwemakumi matanhatu nemakumi masere nematanhatu matani easphalt pombi kubva muna Kubvumbi, apo chete nguva yekurambidza yanga yaiswa.
KUSHANDA KWAAŞTİ KUPEDZISIRA KWAVE KUPEDZISIRA
Mushure measphalt chigamba uye maitiro ekuisa, makumi maviri ematunhu kubva kuAyyurt kuenda kuYenimahalle, Bala kuenda kuMamak, Etimesgut kuenda kuElmadağ yakawana kutaridzika kutsva nemigwagwa yakavandudzwa.
The Metropolitan Municipality, iyo yaisanganisira AŞTİ, apo mashoma mashoma emabhazi anomira akamira, sechikamu chezviitiko zvekoronavirus, akapedzawo basa rekuvandudza asphalt risati raitwa kwenguva yakareba nekuda kwekuuya nekubuda kwemazana emabhazi zuva nezuva. Migwagwa iri pamberi peAŞTİ yakagadzirwazve nechuru matani makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe easphalt.
Metropolitan Municipality yakurumidzirawo basa rekushongedza asphalt munzvimbo dzezvigadzirwa zveBaşkent. Zvikoro zveSainzi Zvikwata zvakaisa matani zviuru zvinomwe mazana masere emakumi mapfumbamwe easphalt paMugwagwa weAdülhalik Renda muOSTİM District uye zviuru zvina mazana matanhatu emazana matanhatu emazana matani easphalt paAdülkadir Geylani Street.
Karabükte Asflat Works Yakatanga
Pavement uye asphalt kukurudzira muKecioren iri mukuzara
Bursa High Speed ​​Kukurudzira mu Ankara! 'Bursa Inofanirwa'
Asphalt Kukurudzira Misha
Batmanda Road Kukurudzira
Asphalt Kubatanidza kubva kuMetropolitan
Uzungöl uye Sümelaya Cable Car Campaign
Iron-network mobilisation in private sector yakatanga
Kubatanidzwa Kaka paZincirlikuyu Metrobus Station
Kufambiswa Kwevanhu Vakawanda Kukurudzira Republic neDemocratic Rally muIzmir
Kuvhiringidzwa muIzmir Transportation
İZBAN Kukurudzira Munharaunda Yekutakura
Izmir mitsetse yakasimba inoramba ichisangana
Snow Removal Campaign paTareji
Mutungamiri Arslan: Başar High-speed yekusimudzira chitima inoenderera mberi kubudirira kubudikidza naBakan
Asphalt Kukurudzira muMaltepe
Asphalt Kukurudzira muMamak